Faah Faahin: Ciidamada Al Shabaab Oo Dagaal Kula Wareegay Degmada Ijaara Ee Dalka Kenya.
Saturday December 30, 2017 - 14:49:52 in Wararka by Super Admin
Ciidamo aad uhubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerar xooggan ku qaaday mid kamida magaalooyinka wadanka Kenya waxaana jira khasaara hantiyadeed oo weerarkaas ka dhashay.
sawir Hore weerar Lamu ka dhacay
Wararka ka imaanaya degmada Ijaara ayaa sheega in ciidamada Al Shabaab ay xalay cagta mariyeen magaalada ayna la wareegeen gacan ku heynta xarumaha muhiimka ah ee magaaladaas laga maamulayay.
Warbaahinta Maxalliga Kenya ayaa xaqiijisay in ciidamada Booliska iyo kuwa Melleteriga ay isaga firxadeen deegaanka ijaara kadib markii xabaddu bilaabatay taas oo dagaalyahannada Al Shabaab usuurta gelisay in ay si fudud kula wareegaan magaalada.
War rasmi ah oo kasoo baxay Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu xaqiijiyay in Mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna ghaniimeysteen gaari kooyaal ah oo ciidamada Kenya uga carareen gudaha magaalada.
"Mujaahidiintu howlgal ayay ka fuliyeen degmada Ijaara ilaah fadligiis waxaa usuurta gashay in ay si buuxda ula wareegaan magaalada halkaasna waxaa isga firxaday cadawga Nasaarada Kenya oo runtii ubabac dhigi waayay weerarka Mujaahidiinta" ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Al Shabaab ay gubeen saldhigga Booliska Ijaara, xarunta dhismaha shirkadda Safaaricom iyo sidoo kale Xarunta Bankiga dowladda ee degmada.
Saraakiil katirsan Ciidanka Al Shabaab ayaa goob fagaare ah isugu keenay shacabka magaalada halkaas oo ay khudbado ugu jeediyeen, saraakiisha ciidanka Hoggaamineysay ayaa muslimiinta ku baraarujiyay in ay ka fogaadaan dhaqamada aan waafaqsaneyn shareecada islaamka islamarkaana aysan wax wada shaqeyn ah layeelan dowladda Kenya.
Sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay xarumaha dowladda oo gubanaya iyo dhismayaal ganacsi oo dad Kenyaan Nasaara ah lahaayeen, waa weeararkii ugu khasaaraha badnaa ee bishan gudaheeda ka dhaca gudaha wadanka Kenya wuxuuna weerarkan imaanaya xilli dowladda Kenya ay sheegtay in ay ka feejigantahay weerar uga yimaad Al Shabaab.